Vaovao - ny tsena peptides collagen trondro manerantany dia tombanana ho 271 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2019.
Ny tsenan'ny peptides collagen trondro manerantany dia tombanana ho $ 271 tapitrisa amin'ny taona 2019. Ny indostria dia andrasana ihany koa hitombo amin'ny CAGR 8,2% mandritra ny vanim-potoanan'ny 2020-2025. Ny trondro dia nanentana ny fahalianana lehibe teo amin'ireo mpamokatra fanafody sy fanafody ho loharanon-karena fitambarana bioactive, ao anatin'izany ny peptides sy ny proteins. Noho ny fahombiazan'izy ireo amin'ny fikarakarana ny hoditra sy ny fikolokoloana volo, nanjary nalaza ny peptides collagen trondro, ary ny bioactivities mitohy eo amin'ireo indostria ireo dia nitaona ny mpikaroka hamokatra vokatra cosmeceutical vaovao mahomby kokoa.
Ny collagen no proteinina fototry ny sela mpampitohy ary ny molekiola ao aminy dia noforonina kofehy polypeptide telo, antsoina hoe rojo alpha, izay amidy sy mivarotra mafana satria be mpampiasa sy mahasoa ny fahasalaman'ny olombelona.
Collagen dia vondrona proteinina voajanahary. Izy io dia iray amin'ireo proteinina miorina amin'ny fibrous lava izay tsy mitovy amin'ny an'ny proteinina globular toy ny anzima ny asany. Be dia be izany any amin'ny ankamaroan'ny invertebrates sy vertebrata.